इनिसियल कमाइपछि किन थच्चिन्छन् फिल्म ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsइनिसियल कमाइपछि किन थच्चिन्छन् फिल्म ?
September 25, 2018 sutraentertainment Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – राजधानीको गोपिकृष्ण हल र अष्टनारायण हलमा शनिबार पुग्ने हो भने दर्शकको भेल देखिन्छ । ती दर्शक एउटै सिनेमालाई आएका हुन् भन्ने पनि छैन ।
तर, तीनै दर्शकसँग तस्बिर खिचाएर चलेकादेखि नाम नसुनेका कलाकारको स्टारडमको नतिजा सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
शनिबार बिदाको दिनमा उर्लिएको यी दुई हलको भेलले सिंगै देशलाई बगाएको छ । दुई हलमा देखिएको भीडकै आधारमा देशभर सिनेमाको व्यापारको नतिजा सार्वजनिक गरिन्छ । गोपिमा भिड लागे सिनेमाको कमाई देशैभरी बम्पर, नत्र सुनसान ।
शनिबारको भीड देखाएर आत्मरतीमा रमाएका नेपाली फिल्मका मेकर आइतबारबाट हलमा चरा मुसा नआउँदा दिक्क त मान्छन् तर असफल भएको स्विकार गर्न तयार हुँदैनन्।
आखिर, इनिसियल रुपमा दर्शकको भीड बटुल्न सफल फिल्म आइतबारदेखि किन सुस्ताउछन् होला ?
नेपालमा वर्ड अफ माउथले लामो समयसम्म सिनेमा चलेको खासै रेकर्ड छैन । यो बर्ष त नाई नभन्नु ल ५ ले चौथो हप्तासम्म आफूलाई जसोतसो टिकायो । यी बाहेक अन्य सिनेमाको अवस्था दयनिय छ ।
वैशाखदेखि साउनको अन्तिमसम्म रिलिज भएका सिनेमाले त एक साता पनि घिटिघिटी भएर व्यापार गरे । भदौमा रिलिज भएको रामकहानी सिनेमा केही शो लिएर मल्टिप्लेक्समा अघि बढिरहेको छ ।
असोज ५ गते रिलिज भएको सिनेमा इन्टु मिन्टु लण्डनमाको व्यापार शनिबार आक्रामक नै भयो । आइतबार यसलाई पनि हलमा दर्शक होल्ड गर्न मुश्किल भैरहेको छ ।
नेपाली सिनेमा शुक्रबार र शनिबार प्रचार, स्टार कलाकार आदिका कारणले चलेका छन् । तर, सिनेमाको कथावस्तुले दर्शकलाई वाध्न नसक्दा आइतबारदेखि सुकेका छन् ।
आइतबारदेखि पिकअप लिने सिनेमा बनाउन निर्माताले दिमाग लगाएका छैनन् । बरु, शनिबार एक दिनको व्यापारमै मख्ख परेर हल चहारेका छन् ।
फिल्म पशुपति प्रसाद, लुट, चपली हाइट, कबड्डी लगायतका फिल्म आइतबारदेखि चम्किएका थिए । यस्ता सिनेमा बनाउनतर्फ लाग्ने कि, शनिबारमात्र दर्शकको चाप बढाउने सिनेमा बनाउनतिर लाग्ने ?
कलरफूल रेड कार्पेटमा हिरोइन र निर्देशकको चिसिएको मन ( रेड कार्पेट रिभिउ )
बलिउडका तीन खान मध्य कट्रिनाले किन रोजिन सलमान खान
जान्नुहोस् ‘नाइ नभन्नु ल ५’ को ३ दिने कलेक्सन
August 27, 2018 sutraentertainment Kollywood 0
तुलसा कार्की,काठमाडौं /शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म नाईँ नभन्नू ल -५ ले सुरुवाती विजनेसमा आफुलाई अब्बल साबित गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा पहिलो दिन केहि कमजोर देखिएको फिल्मको बक्सअफिस कलेक्सन शनिबार र् आईतबार निकै राम्रो पाइएको […]